Ron Gourlay: “Wax heshiis ah ma jiro! Lampard wuu iska bixi karaa” | Goolhaye.com
Ron Gourlay: “Wax heshiis ah ma jiro! Lampard wuu iska bixi karaa”
January 7th, 2013 by Home » Horyalaada » England » Ron Gourlay: “Wax heshiis ah ma jiro! Lampard wuu iska bixi karaa”
Ron Gourlay: “Wax heshiis ah ma jiro! Lampard wuu iska bixi karaa”	Frank Lampard ayaa loo sheegay in hishiiska aan la cusboonaysiin doonin sidaa waxaa xaqiijiyay guddoomiyaha fulinta ee kooxda Chelsea Ron Gourlay.
Lampard ayaa la rumeysanaa in hishiis cusub uu kooxdiis la gali doono kaddib markii uu dhawaan wacdaro dhigay sida shalay Warnaahintu ay shaaciyeen.
Inkastoo sagaal gool kaliya ay ugu harsantahay rikoorka gool dhallinta guud ee kooxda Chelsea ee horey u dhigay Bobby Tambling haddana waxaa muuqata in ciyaaryahanku uu dhabarka u jeedin doono tageeryaasha daacadda u ah ee kooxdiisa.
Taageerayaasha kooxda Chelsea ayaa ka xun in 34-sano jirkaan Lampard uu ka tago kooxda kaddib 12-sano oo uu ku sugnaa kooxda.
Sidoo kale Taageerayaasha kooxdaasi ayaa dhawaan waxa ay ku heeseen hees ah saxiix heshiis cusub, kaddib markii uu jabiyay rikoorkii Kerry Dixon tirada goolasha kooxda u soo dhaliyay ee ah 193 gool intii uu kooxda ku sugnaa.
Dhinaca kala Lampard ayaa dhawan dhaliyay Shan gool, waxaa goolashaas ka mid ah rigooradii uu ka dhaliyay Southampton.
Lama oga halka uu ku dambeyn doono Mustaqbalka ciyaaryahan Frank Lampard.
- Powered by WordPress - Designed by goolhaye web analytics